छैन गठबन्धनका शीर्ष नेताकै गृह नगर र जिल्लामा तालमेल, आफ्ना उम्मेदवार जिताउन ठूलो खड्गो – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
छैन गठबन्धनका शीर्ष नेताकै गृह नगर र जिल्लामा तालमेल, आफ्ना उम्मेदवार जिताउन ठूलो खड्गो
२५ बैशाख २०७९, आईतवार १५:०१
काठमाडौं । पाँच वर्षे अवधि भएको स्थानीय सरकारका लागि अबको पाँचौं दिनमा देशभरबाट ३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि चुन्न निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन दुई कारणले असहज छ ।
पहिलो, गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल छैन । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन् । दोस्रो, जिल्लामा प्रभावशालीमध्येका निवर्तमान पार्टी सभापति कर्ण मल्ल नेपाली कांग्रेस (विपी) ब्युँताएर निर्वाचन अभियानमा हुनुहुन्छ । उहाँले नेकपा एमालेसँग निर्वाचनमा तालमेल गरेका छन् । यी दुई कारणले देउवालाई गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन सहज छैन ।
यसको पुष्टि हुनेगरी प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणाले शुक्रबार डडेल्धुरा पुगेर करुवा चिह्‍न लिएर निर्वाचन अभियानमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई मतदान नगर्न आग्रह नै गर्नुभएको थियो । पार्टीका मेयर नभए बजेट नपठाउने समेत उहाँले धम्की दिनुभयो ।
कारण, कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भइसक्नुभएको नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिनु । हुन त उहाँ कांग्रेसको कारबाहीपछि पार्टीबाट अलग हुनुहुन्छ । उहाँलाई कांग्रेसका केही पुराना नेता कार्यकर्ताले समर्थन गरेका छन् ।
तर, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रेणु दाहाललाई जाने मत काटिन सक्ने आँकलन छ । पौडेलका कारण माओवादीले तालमेलको क्रममा पाएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरमा पनि निर्वाचन जिताउन प्रचण्डलाई सहज छैन ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृहजिल्ला मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेस–जसपा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा त छ । तर, माओवादी केन्द्रकी नमिता न्यौपाने र जसपाकै उमेश यादव बागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा यादव प्रमुख र न्यौपाने उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । यस पटक पनि सोही पदमा दुवै जना बागी भएर उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखामा पनि गठबन्धन दलहरूबीच नै तालमेलमा समस्या भएपछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भनेर भट्टराई मत मागिरहनु भएको छ ।
उहाँले त गठबन्धन दलहरूबीच भएको तालमेलप्रति नै असन्तुष्टि पनि जनाउँदै आउनु भएको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिकामा कांग्रेसबाट सरोज काफ्ले, एकीकृत समाजवादीबाट बाबुराम दाहाल, माओवादी केन्द्रबाट हरि पौडेल र एमालेबाट शिव आचार्य प्रमुख पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
यस्तो समस्या गठबन्धन दलहरूमा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि गृहजिल्ला झापामा गठबन्धनले समस्या खडा गरेको छ ।
उहाँकै गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमालेविरुद्ध राप्रपासहितको गठबन्धन छ । गठबन्धनका कारण ओलीलाई पनि पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन जिताउन मुस्किल छ ।
फिल्डमा अचेत भएका प्रशिक्षक
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा जनप्रतिनिधि
धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालको